Kỹ thuật chăm sóc lan con và lan trưởng thành, các công thức phân bón cho cây lan | Hatgiongtihon.net - trung tâm cung cấp hạt giống tí hơn
Đang Đọc: Kỹ thuật chăm sóc lan con và lan trưởng thành, các công thức phân bón cho cây lan | Hatgiongtihon.net in Hatgiongtihon.net
1 1. Ngeeorchids ezincinci
1.1 1.1. Isigqubuthelo seeorchids
1.2 1.2. Nkcenkceshela izithole zeorchid ezisandul’ ukutyalwa
1.3 1.3. Vundisa iiorchids, iiorchids ezisandul’ ukutyalwa
1.4 1.4. Abalawuli berhorho
2 2. Yeeorchids ezikhulileyo
2.1 2.1. Isigqubuthelo seeorchids ezikhulileyo
2.2 2.2. Nkcenkceshela iiorchids
2.2.1 Izinto ezichaphazela ukunkcenkceshela:
2.2.2 Indlela yokunkcenkceshela ii-orchids:
2.3 2.3. Khulisa iiorchids ukuze zidubule
2.4 Umlinganiselo wokuchumisa kwiiorchids, iicycads
2.5 Ukugxininiswa kwezichumisi kwii-orchids
2.6 Indlela yokunkcenkceshela iiorchids
1. Ngeeorchids ezincinci
Iiorchids ezincinci zibuthathaka kakhulu, aziqhelanga ngokukhawuleza kwiinguqu ezijikelezayo kwindawo engqongileyo, ngoko ke kufuneka zithathelwe ingqalelo kakhulu.
1.1. Isigqubuthelo seeorchids
I-truss ye-orchids yomntwana kufuneka ihlawule ingqalelo kwizinto zokukhanya, ubushushu, ukufuma, umoya. I-canopy kufuneka ibe neemeko ezifanayo naxa isityalo sasisesebhotileni yokutshintshwa, ezifana nokukhanya okuphakathi, ukugquma kwemvula, ukhuseleko lomoya, kunye nomahluko ongephi wamaqondo obushushu emini. Ngoko ke, kuyimfuneko ukwenza i-canopy ye-orchids yomntwana ngokuxhomekeke kumhlaba wegadi kunye neentlobo zezinto eziphathekayo ukuze uphephe iindawo ezinomoya ezingenanto, kodwa ugweme ukuqina kakhulu kwi-steam, okwenza i-orchids ibe lula ukubola.
Ukuze ugweme imvula, uphahla lunokusetyenziswa ngamazinki okanye i-nylon ukuze i-orchids entsha ikhutshwe kwi-vase kwaye ityalwe kwimbiza eqhelekileyo. Izithole ze-orchid ezityalwe kwiimbiza ezihlukeneyo zinokufakwa phantsi kwe-canopy kunye ne-bamboo splint ukufumana malunga ne-30% yokukhanya. Ngaphantsi kwecanopy kufuneka udale umaleko wegridi yesikwere ukunciphisa ukukhanya kunye nokuphepha imiphumo eyingozi yemvula enkulu, enobunzima obunokutyumza i-orchids.
1.2. Nkcenkceshela izithole zeorchid ezisandul’ ukutyalwa
Ukunkcenkceshela iiorchids kufuneka kulumke kakhulu. Kwiintsuku ezi-1-2 emva kokutyala, akukho mfuneko yokunkcenkceshela ngokukhawuleza ngenxa yokuba izinto zokutyala zisandula ukuhlanjwa, zifakwe kwaye zisagcina ukufuma okuphezulu. Ukuba unkcenkceshela ngokukhawuleza okanye udala ukufuma okuphezulu, isityalo siya kubola ngokulula. Ngokuqhelekileyo izinga lokufa kwezityalo kweli nqanaba liphezulu kakhulu ngenxa yamanzi amaninzi. Ke ngoko, abalimi be-orchid kufuneka bajonge rhoqo indawo ekhulayo ukuze babone ukuba imanzi okanye yomile, yomile ezantsi kwembiza okanye ngaphezulu ukuze babe nolawulo olufanelekileyo lokunkcenkceshela iiorchids ezincinci.
Enye into ekufuneka uyiqaphele kukuba ii-orchids ezintsha zisanda kukhutshwa ebhotileni kangangeentsuku ezimbalwa, amagqabi ahlala abuna, ngoko ke kufuneka ankcenkceshelwe ngobunono ngobunono ngombhobho oxutyiweyo, ocoliweyo, unkcenkceshelwa rhoqo ngamaxesha angama-3-4. imini ukuba yome kakhulu. Umgaqo kukugcina iiorchids zifumile kodwa zingabi manzi kakhulu.
1.3. Vundisa iiorchids, iiorchids ezisandul’ ukutyalwa
Xa iingcambu zivela, qalisa ukuchumisa kwaye ukwandise umthamo wamanzi amatsha. Umgaqo wokufakwa kwesichumiso kufuneka kwakhona usuke kugxininiso oluphantsi ukuya kwiqondo eliphezulu. Ukususela kumaxesha angama-1-2 ngeveki kuxhomekeke kwindawo ekhulayo, ukukhula okuphakathi kunye nokusabela kwe-orchid esiyibonayo.
1.4. Abalawuli berhorho
Ngama-orchids amancinci, ngokuqhelekileyo kukho ukubola kuphela (ukumanzisa) kwiimbiza ngenxa yamanzi amaninzi. Kunokwenzeka ukuba usebenzise iThiram okanye iSodium okanye i-Thophenylolenate ukukhusela, ukuthobela ingqalelo kwimingxuma, amaphela … ukuluma izithole ze-orchid kuzo zonke izinto ezivela kwiingcambu ukuya emagqabini. Sebenzisa iMalathion ukubulala iintwala ezimhlophe, iiplanthoppers ezimbizeni, kwindawo yokukhula.
2. Yeeorchids ezikhulileyo
Ukunceda iiorchids zikhule kakuhle, nasiphi na isitiya seorchid kufuneka senze ezi zinto zilandelayo kakuhle:
2.1. Isigqubuthelo seeorchids ezikhulileyo
Ukugcina umthunzi, kuphephe ukukhanya okuthe ngqo emini emaqanda okanye xa kunetha kakhulu, i-canopy kufuneka ikwazi ukuhlengahlengisa ukukhanya ukuze ihambelane neemfuno zeorchid ekhulayo.
I-canopy imalunga ne-2.5-4m ukuphakama, uphahla luthe tye okanye luthambekele, kodwa i-bamboo braces kufuneka ibekwe eNyakatho-South direction ukuze xa ilanga lihamba emini eMpuma-West direction, isithunzi se-bamboo. izihlangu eziqinileyo aziyi kushukuma, zisoloko zigquma iiorchids. Lungisa umgama phakathi kwamaqweqwe ukuze ulungele iimfuno zokukhanya ezifunwa yiorchid.
– I-Spacing ilingana nobubanzi bebrace nganye, ngokukhanya okumalunga ne-50-60%, ifanelekile kwiCattleya, iDendrobium…
– Ukusondela komgama wezihlangu zezilima ezidityaniswe ngentsinjana/ngeplangana, okona kusezantsi ukukhanya, malunga ne-30-40% ye-Phalaenopsis…
-Umxinwa umgama we-splint, ukukhanya okukhanyayo, malunga ne-80-90% yeVanda, i-Ascocentrum …
Icanopy kufuneka ibekwe kuMntla-indlela esemazantsi yeyona ndlela ilungileyo ukuze isitiya se-orchid sifumane ukukhanya kwasekuseni ngakumbi, ukukhanya kwasekuseni kungcono kwiiorchids kunokukhanya kwemini kuba ukukhanya kwasekuseni kubangela ukuba ubushushu bunyuke kancinci, izityalo zeOrchid azikhathazwa bubushushu. Umothuko, kunye nokukhanya kwemini kuxa okusingqongileyo kushushu kuba zonke zikhupha ubushushu emva kokufumana ukukhanya okukhulu kwelanga emini emaqanda.
Uninzi lwama-orchids alufanelekanga kwimvula ethe ngqo, imbewu enzima, ngakumbi ii-orchids ezincinci. Ngoko ke, kukho rhoqo umnatha ongaphantsi kwe-canopy ukuze ugweme imiphumo eyingozi yemvula enzima, eyimfuneko kwii-orchids ezincinci kunye ne-orchids.
2.2. Nkcenkceshela iiorchids
Ukunkcenkceshela yinto ebonakala ilula, kodwa ukunkcenkceshela ngokwaneleyo ukwenza izityalo zikhule kwaye zikhule kakuhle kunzima kakhulu. Amanzi amancinci, iiorchids zibune zize zife, kodwa ukunkcenkceshela kakhulu kwenza iingcambu ze-orchid zibe manzi, ioksijini ayikwazi ukufunxa izondlo, iingcambu ezibolile ezinde ziya kufa. Ukunkcenkceshela kufuneka kuqinisekise ukuhambelana kobushushu, ukufuma kunye nokukhanya.
Izinto ezichaphazela ukunkcenkceshela:
+ Ixesha lonyaka: Imozulu yelizwe lethu inamaxesha onyaka amabini ahlukeneyo:
Ngexesha lemvula, ukufuma kuphezulu, nto leyo ilungele ukukhula kwe-orchids. Kweli xesha lonyaka, umlinganiselo wamanzi emvula uye wahlangabezana neemfuno zamanzi eorchid ngokwentelekiso ngokupheleleyo. Ke kweli xesha lonyaka, ukunkcenkceshela iiorchids kufuneka kuqwalaselwe ngononophelo ubungakanani bamanzi kunye nenani lamaxesha okunkcenkceshela.
Ngexesha lonyaka elomileyo, umoya wokufuma uphantsi, kodwa eli lixesha lokuphumla kwezinye iiorchids. Olu kuphumla luyimfuneko ekuphuhlisweni kweentyatyambo kunye nokukhula okunamandla okulandelayo, ngoko ukunkcenkceshela akufanele kunikwe ngeli xesha. Ixesha lokuphumla le-orchids lenzeka xa ziqala ukulahla amagqabi (kwii-orchids ezineziqu ezininzi), kwii-orchids ezingatshatanga, kunzima ukuqaphela ixesha lokuphumla kwaye abanalo i-pseudobulb yenyani yokugcina amanzi, ngoko kufuneka bankcenkceshelwe. amaxesha amaninzi okunyusa ukufuma, ukunciphisa ukugqithiswa kwee-orchids. Ke ngoko, ngeentsuku ezomileyo ezinobushushu obuphezulu, inani lamaxesha okunkcenkceshela kufuneka landiswe.
+ Ngokweentlobo ze-orchid, ngokwexesha lokukhula
Iindidi ezahlukeneyo ze-orchid zineemfuno ezahlukeneyo zamanzi. Izityalo ezinamagqabi amaninzi, amagqabi amakhulu alahlekelwa lula ukuhamba kwamanzi ngamagqabi, ngoko zifuna ukunkcenkceshelwa ngakumbi. Amagqabi atyebileyo, atyebileyo ayakwazi ukumelana nembalela, inani lamaxesha okunkcenkceshela lincinci. Izityalo ezineengcambu zomoya ezininzi zifuna ukunkcenkceshelwa rhoqo. Ngexesha leentyantyambo, ukuhluma, kunye nokuhluma, izityalo zidinga amanzi amaninzi, ngoko kufuneka zinkcenkceshelwe amaxesha angama-2-3 ngaphezu kwesiqhelo. Ngexesha lokuphumla, isityalo sidinga amanzi amancinci, kodwa kufuneka sigcine indawo engqongileyo ifumile.
+ Ngokwendawo yokukhula kunye nemeko yokukhula kwe-orchid
Ngokuxhomekeke kubukhulu bokukhanya kwe-canopy, ukungena komoya kwigadi ye-orchid, izinto zokutyala kunye nohlobo lwebhodwe … Zonke zihambelana nomswakama, ngoko ke indlela yokunkcenkceshela i-orchids kufuneka iguquguquke kakhulu. Ukuba kukho ilanga elininzi, umoya omninzi, iimbiza ezivulekileyo, ukugcinwa kwamanzi kakubi, ngoko kufuneka unkcenkceshele amaxesha amaninzi.
Indlela yokunkcenkceshela ii-orchids:
Kuxhomekeke kwisixhobo sokunkcenkceshela. Umbhobho wokuhlamba kwiigadi ezinkulu ze-orchid yeyona ndlela yoqoqosho, eyona ndlela ilula, kodwa eyona ndlela ilungileyo yokunkcenkceshela i-orchids kukunkcenkceshela, amanzi awela kwisiseko se-orchid, ukunkcenkceshela akulimazi amagqabi, izityalo zinokunkcenkceshelwa. ngebhotile yokutshiza okanye iimpompo.
Ngokuqhelekileyo ukunkcenkceshela ekuseni nasemva kwemini, ukuba kushushu kakhulu, kwandisa ixesha lokunkcenkceshela, kodwa umthamo wamanzi kufuneka unyuke. Kuphephe ukunkcenkceshela amanzi ashushu amancinci, utshise isityalo. Kwilanga elitshisayo lasemini, indawo engqongileyo ifanele ifumile kunokuba incenkceshelwe ngokuthe ngqo kwiorchid.
Umthombo wamanzi okunkcenkceshela: Unokusebenzisa imithombo emininzi yamanzi ukunkcenkceshela iiorchids logama nje amanzi ecocekile, kungekhona ialum, engeyotyuwa, enepH efanelekileyo emalunga ne-5.5-7. Le mithombo yamanzi ilandelayo ingasetyenziswa:
+ Amanzi emvula: ngowona mthombo wamanzi ufanelekileyo kuba acocekile kwaye anoqoqosho, i-pH yamanzi emvula yi-6-7 efanelekileyo kakhulu kwiiorchids ezincinci.
+ Amanzi echibini: kwakhona ngumthombo wamanzi angabizi kakhulu, kodwa kuya kufuneka unikele ingqalelo kwi-pH, ngakumbi inqanaba le-alum kumachibi asandul’ ukugrunjwa. Ngamachibi kunye namachibi angajikelezi rhoqo, ingqwalasela kufuneka ihlawulwe ekuhlambulukeni kwamanzi, kwaye amachibi ajikelezayo kunye namachibi kufuneka ahlambuluke.
+ Umlambo kunye namanzi omlambo: ngumthombo olungileyo wamanzi okunkcenkceshela, kodwa nikela ingqalelo kwi-alluvium kunye ne-alum, ityuwa…
+ Amanzi etephu: kufuneka uthathele ingqalelo umgangatho wamanzi, kumanzi etephu kukho iklorini engalunganga kwiiorchids kwaye kufuneka ubukele ityuwa emanzini. Musa ukusebenzisa amanzi ashushu kakhulu okanye abandayo kakhulu ukunkcenkceshela iorchid.
+ Amanzi equla: nikela ingqalelo kubulukhuni, i-alum kunye ne-pH.
2.3. Khulisa iiorchids ukuze zidubule
Ukuchumisa iiorchids kubaluleke kakhulu
Ngokuqhelekileyo abantu bagxininise kwizinto ezi-3 eziphambili: N, P, K kunye nemilinganiselo ngokuxhomekeke kwinjongo yokusetyenziswa, iintlobo ze-orchids, ixesha lokukhula kwe-orchids. Ukongezelela, kunokwenzeka kwakhona ukudibanisa izinto ezininzi zokulandelela ezifana nobhedu (Cu), isinyithi (Fe), i-zinc (Zn) … kunye nezinye iivithamini ezibalulekileyo.
Iintlobo zezichumisi zeorchids
Umlinganiselo wokuchumisa kwiiorchids, iicycads
Ngokuqhelekileyo abantu basebenzisa imilinganiselo emi-4 ngolu hlobo lulandelayo:
– Umlinganiselo: 1:1:1 ulingana ne N:P:K ratio
– Umlinganiselo: 3:1:1 high N ratio
– Umlinganiselo: 1:3:1 umlinganiselo weP ophezulu
– Umlinganiselo: 1:1:3 umlinganiselo we-K ophezulu
Ukongeza, zininzi ezinye iireshiyo ezifana: 3:1:2; 3:2:1…
Ukugxininiswa kwezichumisi kwii-orchids
Kwinqanaba ngalinye, ukuxinwa kwezinto ezi-3 N, P, K nazo zitshintsha
Umzekelo: Ngokwefomula yeLeConfle (1981), sinazo:
– Ifomula ephezulu: 30-10-10 (50) isilinganiso 3: 1: 1 ekukhuleni kwe-orchid kunye namagqabi.
– Ifomula ephantsi: 10-18-10 (38) 1: 2: 1 umlinganiselo weentyantyambo ze-orchids.
– Ifomula ephantsi: 10-10-20 (40) 1: 1: 2 umlinganiselo wokuhluma i-orchids.
Nangona kunjalo, isixa sesichumisi siguquguquka kakhulu, kuxhomekeke kwimozulu, ukufuma, ukukhanya, ukushisa, … kuxhomekeke kwinqanaba lokukhula kwesityalo esilungisa ngokufanelekileyo.
Ngaphandle koko, abantu basebenzisa izichumisi eziphilayo kunye nezinye izinto ezibalulekileyo. Zininzi iindidi zezichumiso zendalo ezifana nomchamo, umgquba wezilwanyana, izidumbu zezilwanyana, iimbewu zembotyi zesoya ezithotyiweyo…
Ezi ntlobo zezichumiso ze-organic zilungile kakhulu kwii-orchids, kodwa xa zisetyenziswa, nikela ingqalelo kwindlela yokunkcenkceshela, ukugxininiswa kokunkcenkceshela, ukuphepha ukulimaza i-orchid (ngomgquba wezilwanyana kunye nezilwanyana eziseleyo ezimele zifakwe ukubola), ziphephe ukwenza. ityhefu ye-phosphorus.
Indlela yokunkcenkceshela iiorchids
Zininzi iindlela zokunkcenkceshela izichumisi, kodwa umthetho jikelele kukuba xa unkcenkceshela, ezi mfuno zimbini zilandelayo kufuneka zifezekiswe:
– nkcenkceshela isichumiso ukuze izityalo zifunxe kakhulu.
– Ukunkcenkceshela kwezichumiso kokona kuqoqosho.
Njengoko sonke sisazi, ingcambu iyilungu eliphambili elithatha amanzi kunye neetyuwa zamaminerali kwisityalo, ngaphezu koko, amaqabunga nawo anamandla okufumana amanzi kunye neetyuwa zamaminerali, ngakumbi kwimeko ye-orchids encinci. Kodwa kwii-orchids ezinkulu, ukufunxa ngamagqabi akwanelanga izondlo zezityalo ekukhuleni nasekuphuhliseni isityalo. Ngoko ke, kufuneka inkcenkceshelwe ukuze iingcambu zikwazi ukufunxa izondlo ngeyona ndlela ilungileyo.
Ukuba ufaka isichumiso njengokunkcenkceshela, kufuneka usebenzise isichumiso esininzi kakhulu, ungasigcini isichumiso. Ukuze kuphunyezwe ezi mfuno zimbini zingasentla ngaxeshanye, ngokweziphumo ezifunyenwe kwiminyaka edlulileyo, ngaphambi kokuchumisa, kufuneka sinkcenkceshele ngokujika kwamanzi ukuze i-substrate ingene lula kwaye ingaqhubeki. Oku kuya konga i-1/2 yesixa sesichumiso.
Isichumisi kufuneka sinkcenkceshelwe kwakusasa okanye emva kwemini, hayi emva kwemini.
Ixesha lokunkcenkceshela lixhomekeke kwizinto ezininzi ezifana neemeko zemozulu, indawo yokukhula, imeko yezityalo, uhlobo lwesichumisi, ukuxinana kwesichumisi…
Ngokuqhelekileyo ukunkcenkceshela kanye ngeveki, kodwa ukuba igadi ye-orchid inomthunzi, ikhefu lide (ientsuku ezili-10-15 / ixesha). Ngokwahlukileyo, igadi ye-orchid enokukhanya okuninzi inokunkcenkceshelwa kabini ngeveki. Emva kokuchumisa, yongeza umthamo wamanzi okunkcenkceshela ngosuku olulandelayo ukuhlamba ityuwa eseleyo, ukuphepha iziphumo ezibi kwi-orchid.
Umthombo: Incwadi ye-Orchid – IYunivesithi yaseThai Nguyen (iYunivesithi yezoLimo namaHlathi)